Waxaa suurto gal ah ii inay Beddelaan My M4P files in MP3 ah?
> Resource > Video > Sidee Baan U beddelaan M4P in MP3
Haddii aad soo bixi ama lagu soo iibsaday wax heeso ka Lugood, file maqal ah soo lahaa qaab M4P file taas oo DRM (Rights Digital Management) la ilaaliyo. Sidaa darteed, an M4P file maqal ah noqon karaa oo kaliya furan ama ciyaaray qalabka Apple ah. Haddii aad u rajeeyay in ay dhagaystaan ​​heesaha M4P aad ee qalabka aan Apple kale ku salaysan, asal ahaan aad ka tagay oo aan lahayn doorasho kale marka laga reebo ka bedelayaan ama waxaa lagu badbaadinayo in file kale ama qaab kale. The file maqal ah ugu doorbiday ama qaab waa MP3 ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah qalabka kale ee aan Apple oo ku salaysan.
Waxaad isku dayi kartaa in la furo file M4P aad on ciyaaryahan warbaahinta ay taageerayaan iyo isku day in aad magaca ama badbaadin nooca file kale. Taasi waa habka ugu fudud ama habka ay u isticmaalaan si ay u badalaan file M4P si aad u MP3 ah. Haddii ay sidaa tahay guuldareysto, haddii aad doorbidayso dambeeya waa in la badalo files M4P si aad u MP3 la Converter ah. Ma aha wax adag in la helo mid ka mid ah in qaban karo qaab beddelidda laakiin ma laga yaabaa in sida ugu fiican ee ay noqon Converter Wondershare Ultimate u Mac .
Rakibaadda ee Converter Wondershare ugu dambeeysa ee Mac qaadan doontaa oo keliya xoogaa daqiiqo ah. Marka waxa la dhamaystiro, si fudud double-guji icon ah u bilowdo barnaamijka. Naftaada badbaadi markii qaar ka mid ah oo kaliya jiidi-iyo-hoos u dhac aad M4P files audio gal barnaamijka oo dhan hal mar. Qorshahaa waxa toos ah weli quruxsan barnaamijka ka dhigayaa mid aad u fudud u isticmaala si ay isu maraan ku dhawaad ​​qaababka bixiyeen. Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee isku dayaya in ay badalo file ah, ha ka welwelin, waxaan idinku hanuunin doonaa iyada oo loo marayo.
2 Beddelaan files M4P in MP3
Fadlan dooro Audio ka fursadaha hoose ee shaashadda si ay u doortaan qaab saarka doorbidayso aad. Ka dib markii in, ku dhufo kaliya ku badalo button. Waxaa laguu sheegi doonaa fariin pop-up mar diinta ayaa ku dhameysatay. Si aad u soo ceshano aad files gediyay M4P, kaliya aad u leeyihiin in ay guji fariinta.
Fiiro gaar ah : Kale badan MP3, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo files M4P si aad u qaabab socon kale ujeedooyin web qaybsiga. Just riix Web Sharing doorasho iyo baadhaan sida aad music qoyska iyo saaxiibada wadaagi karo.
3 Download music online
Haddii aad jeceshahay in aad music, aad u jeclaan doonaa feature gaar ah taas oo ay Converter Ultimate sidoo. Halkii aad iibsanayso ama aad soo degsado music ka Lugood, aad si toos ah uga goobaha online caan ah sida YouTube ama Spotify soo bixi kartaa music aad ugu jeceshahay. Ka dib markii in, waxaad sii wadi karo si loogu badalo aad files audio in aad rabto in aad wax kasta oo qaab si aad u maqashid dhawaaqa on kombuyuutarrada gacanta aad. Isku day inaad hadda!